Gudoomiyaha Baraawe "Shabaab waxay xasuuqeen 16 qof oo isku qa... | Universal Somali TV
Gudoomiyaha Baraawe "Shabaab waxay xasuuqeen 16 qof oo isku qabiil ah"
Gudoomiyaha Degmada Baraawe ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Cumar Sheekh Cabdi Shafaana ayaa Ururka Al Shabaab ku eedeeyay inay siyaabooyin kala duwan fagaare ugu toogteen 16 qof oo isku heyb ahaa.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in xukuno aan sharci ahayn ay Shabaabku ku fuliyeen dad u dhashay buu yiri deegaanka, xilli sideed ka mid ah sida uu sheegay ay ku toogteen deegaanka Kuunya Barrow oo hoos-tagga Degmada Baraawe.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in dadkan ay ka mid ahaayeen dad ay Shabaabku siyaabooyin kala duwan toddobaadkii hore ugu toogteen fagaareyaal ku kala yaala Saakow, Jilib, Buulo Fulaay iyo Kuunyo Barrow.
"Xasuuqa waxaa loo gaystay shacabkayaga aan anaga masuulka ka ahayn, oo dadka deegaanka u dhashay ah, weliba ahaa dadkii deegaanka ee la yaqaanay. Dhimashada waxay sii mareysaa illaa iyo 16 qof. Waa hal qabiil dadka ay xasuuqa u gaysteen." Ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Baraawe.
Gudoomiyaha oo la hadlay VOA ayaa yiri "Shabaabka dhibaato badan ayay dadka shacabka ah ku hayaan, xoolahooda inta ay dhacaan ayay weliba dil ugu sii dareen. Fagaare cad ayay dadka ku dilayaan."
"Waxay leeyihiin nimankan waa basaas, niman maanta afka Somaliga aan aqoon ayay leeyihiin Mareykanka ayay la hadlayeen. Ayuu yiri Gudoomiyaha oo intaa ku daray "Anaga dadka shacabka ah ee la gumaadayo runtii marnaba raali ugama noqoneyno, shacabka la gumaadayo waa shacabkayagii aan anaga masuulka ka nahay. Teeda kale mar walba waxay leeyihiin basaasnimaa ku dileynaa, Mareykan ayay la hadlayaan. Dadka af Somaliga aqoon haddii Mareykan la hadli lahaayeen waaba iska fiicnaan laheyd, waa Sirdoon CID-da Mareykanka waaye iyo barnaamijyo noocaas ah ayay dadka ku dileen."
Kan-xigaGuddiyada Doorashooyinka oo tababar l...
Kan-horeCumar Cali Isaaq (Balash) oo loo maga...
62,035,837 unique visits